ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်: ပူသော ဗိုက် ကို ဒီလိုချမယ်…
ပူသော ဗိုက် ကို ဒီလိုချမယ်…
အဆီ တွေဟာ ခန္ဓာကိုယ် တခုလုံးမှာ ဘေးရန် အပေးဆုံးပါ။
အလှပျက်တယ် ဆိုတာထက် တုတ်နေသော ခါး (ပူနေသောဗိုက်) ဟာ ရောဂါ ဖြစ်လွယ်တဲ့ လက္ခဏာ ပိုင်ဆိုင်သူလို့ ခေါ်လို့တောင် ရပါတယ်။
အဲဒီတော့ ကျန်းမာ ပေါ့ပါး ချင်သူတိုင်း ဗိုက် အဆီလျှော့ဖို့ စဉ်းစား သင့်တယ် ဆိုပါတော့။
ဒီနေရာမှာ အိပ်ထမတင် လုပ်ရုံ နဲ့တော့ အလုပ်ဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဗိုက် အဆီက ဘယ်လို စုလာတယ် ဆိုတာကို သဘောပေါက် သွားရင်တော့ ချက်ကောင်းကို မိသွားမှာပါ။ တကိုယ်လုံးက အဲလောက် မဝတာတောင် ဗိုက်က ပုံ့ပုံ့ကလေး ပူနေရတဲ့ အကြောင်းကို အကျဉ်းလေး ရှင်းပြ ပါ့မယ်။
ဆေးပညာ ပညာရပ် ဆိုင်ရာ စကားနည်းနည်း ပါပေမယ့်။ ဒီနှစ်ကြောင်းလောက် ကိုတော့ အနည်းငယ် သီးခံ ဖတ်ပေးပါ။ (လုံလောက်တဲ့ ဗဟုသုတ မပါဘဲ အဆီကျဖို့ နည်းလမ်း မသိနိုင် လို့ပါ။)
ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်ထဲမှာ ရှိတဲ့ cortisol level (ကော့တစ်ဆို ပမာဏ) မြင့်လာတာနဲ့ ဗိုက်အဆီတွေ စုပုံလာတော့ တာပါပဲ။ အဲဒိ cortisol က ဘာလို့ မြင့်လာ တာလဲ၊?
အဓိက တရားခံကို ပြခိုင်း ရင်တော့ စိတ်ဖိစီးမှုလို့ ပြောရမှာပါ။
လူတယောက် အလုပ်ကြောင့်၊ ပတ်ဝန်းကျင် ဆက်ဆံရေး..တစ်ခု ခုကြောင့် စိတ်ဖိစီး နေပြီဆိုရင် cortisol က ထကြွ ပွားများ လာပြီး ကယ်လိုရီတွေ လောင်ကျွမ်းပေးတဲ့ ကြွက်သား တွေကို ဖျက်ဆီး လိုက်ပါတယ်၊ ပြီးရင် ဝမ်းဗိုက် တစ်ဝိုက်မှာ အဆီတွေ သိုလောင်အောင် ဖန်တီး လိုက်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုက အဓိက ရှင်းလင်းရမယ့် ဆရာကြီး ဆိုပါတော့။
စိတ်ဖိစီးမှု ဆိုတာကလဲ နေရထိုင်ရ အဆင် မပြေမှု ကြီးမား လာတာနဲ့ ရောက်ရောက် လာတတ် တာပါ။
အကြောင်းရင်း ဗဟုသုတကို အရင် မရှာဘဲနဲ့  ဒီအတိုင်း ပိန်အောင် စားနေ ကျထက် အစား လျှော့စားတာ။ ညစာ လုံးလုံး မစား တာမျိုး တွေက စိတ်ဖိစီးမှုကို အဆိုးဆုံး အဆင့်ထိ ဖြစ်စေ ပါလိမ့်မယ်။
ဗိုက်ဆာလေ..စားဖို့ သီးခံနေ ရလေလေ..စိတ်ဖိစီးလေ။ စိတ်ဖိစီးလေ cortisol မြင့်ပြီး ဗိုက်အဆီ စုလေ ဖြစ်မှာပါ။
အဲဒီတော့ ကိုယ့်မှာတော့ သီးခံပြီး အစာ မစားဘဲ နေလိုက်ရ ပေမယ့် ဗိုက်ပူပူလေးက မပြောင်းမလဲ ကျန်နေတာ မျိုးတွေ ကြုံပါလိမ့်မယ်။
အဲတော့ အခုဖော်ပြမယ့် ၆ချက်(လုံး)ကို လိုက်နာပါ။
အသိဥာဏ်ကြီးကြီးနဲ့ ဗိုက်အဆီကိုအောင်မြင်စွာ ချနိုင်သူ အဖြစ်ခံယူပါ။
အချက်၆ချက်က ဘာတွေလဲ မှတ်သားကြရအောင်-
၁။ ။ အိပ်စက်ပါ။
ညဉ့်နက်တဲ့ အထိကို မအိပ်ဘဲ နေဦးမယ် ဆိုရင် သင်သေချာ ပြန်စဉ်းစားပါ။ အိပ်ရေး မဝဘူးဆိုရင် ပင်ပန်းနေပြီး. အချိုနဲ့ အခြား အဆီ တက်စေမယ့် အစာတွေကို
ခန္ဓာကိုယ်က တောင့်တ စေပါမယ်။ ပြီးတော့ အိပ်ရေး မဝတာဟာ ခုနကပြောခဲ့တဲ့ cortisolတွေကို မြင့်စေ ပါသေးတယ်။
ဒါကြောင့် အိပ်စက်ဖို့ ကို နံပါတ် ၁ ပြောရ တာပါ။ တညကို ၇နာရီအိပ် တာ အကောင်း ဆုံးပါပဲ။
တညကို အိပ်ထ မတင် လေ့ကျင့်ခန်း အခါ ၁၀၀၀ လောက်လုပ်တယ် ဆိုရင် ဗိုက်ကြွက်သားတွေ တက်လာ စေမှာမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီပေါ် မှာတော့ အဆီ တလွှာက အရင်အတိုင်းကျန်နေ ပါဦးမယ်။ အဲဒီ အိပ်ထမတင် နည်းလမ်းတွေထက် စာရင် နေရာအနှံ့က ကြွက်သားတွေ လုပ်ရှားတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း ကိုသာ လုပ်ဖို့ တိုက်တွန်း ချင်ပါတယ်။
လမ်းလျှောက်တာ ပြေးတာမျိုး ဆိုရင် ကောင်းပါတယ်။ အပြင်မထွက်နိုင်လို့ အခန်းထဲမှာပဲ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ချင်တယ် ဆိုရင် Planking ဆိုတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းမျိုး လုပ်ပါ။ Planking ဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်ကို မှောက်ရက် နေပြီး တံတောင်ဆစ်၊ ခြေဖျားထိပ်နဲ့ ထောက်ထားပြီး လုပ်တာမျိုးပါ။ သိချင်သူများ အတွက် ကိုယ်တိုင် အင်တာနက်မှာ ရှာကြည့်နိုင် သလို အခွင့်သင့် ရင် ဗီဒီယို တင်ပေး ပါ့မယ်။
၃။ ။သကြားကို ရန်သူလို့မှတ်ပါ။
ဗိုက်အဆီကို တိုက်ဖျက်ရာမှာ အစား ဆင်ခြင်တာက ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ လေ့ကျင့် ခန်းက ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ တိုက်ခိုက် ရတယ်ဆိုတာ သဘောပေါက် နေဖို့ လိုပါတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်းပဲ လုပ်ပြီး အစားအသောက် ဂရုမစိုက်ရင် အလကားပါပဲ။ ကျန်းမာရေး မညီညွတ်တဲ့ သရေစာထက် စာရင် အသားဓာတ်၊ ဟင်းသီး ဟင်းရွက်၊ အစေ့အစံ တွေကို အစားထိုးပါ။
ဥပမာ..အချိုတစ်ခုခုတောင့်တနေရင် ချိုတဲ့ သဘာဝ အသီးကို စားပါ။ ကော်ဖီသောက်ရင် သကြား မပါသလောက်ကို သုံး ပါ။ ဒါမှမဟုတ် ကယ်လိုရီလျှော့ ထားတဲ့ သကြားရှိရင် အဲဒါကို သုံးပါ။
၄။ ။ဗီတာမင် C လိုအပ် ပါတယ်။
သင် စိတ်ဖိစီးမှု ကြီးစိုး လာရင် cortisol တွေ ထုတ်လွှတ်တော့ တာပါပဲ။ ဗီတာမင်C က cortisol တွေကို အလွန်အကျွံ မဖြစ်ရအောင် ထိန်းပါ လိမ့်မယ်။ ဗီတာမင် C ရဲ့ နောက်ထပ် ကောင်းတဲ့ အချက်က ဖျားနာခြင်း ကိုလဲ ကာကွယ် တတ်ပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် စိတ်ဖိစီး လွန်းလာရင် ဗီတာမင် C စားသုံးမှုကို မြှင့်ထားပါ။ ဗီတာမင်စီ မှာနာမည်ကြီး တာကတော့ လိမ္မော်သီးပါ။ ပန်းငရုတ်ပွ၊ ကိုက်လန် နဲ့ ကီဝီသီးကို လဲ စားကြည့်ပါ။ အဲဒီ့သုံးခုက နာမည်ကြီး လိမ္မော်သီး ထက်တောင် ဗီတာမင် C တွေပါနေ ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ မှားဖတ်မိတာမဟုတ်ပါဘူး အဆီစားပါလို့ ပြောတာပါ။ အဆီပိုတွေ လောင်ကျွမ်းဖို့ အဆီဓာတ်လိုပါတယ်။ အထက်မှာပြောခဲ့သလို သကြားက အဆီပိုတွေဖြစ်စေပါတယ်။ အဆီဓာတ်ကို မရစေပါဘူး။ အဆီဓာတ် (ကောင်းတဲ့ အဆီဓာတ် Omega 3) က ဘယ်က ရသလဲဆိုရင် ဆော်လမွန်ငါး၊
ထောပတ်သီး နဲ့ သစ်ကြား သီးတွေက ရနိုင် ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဆီဓာတ်(Omega 3)လဲ စားသုံးဖို့လိုက်နာပါ။
၆။ ။အသက်ရှုနှုန်း ကိုမမြန်အောင်နေပါ။
ဝင်သက် ထွက်သက်ကို ခပ်ရှည်ရှည် ထားတာဟာ အလွန် လွယ်ကူ လှပါတယ်။ အလုပ်လဲ မပျက် ပါဘူး။ စိတ်တွေ တင်းကြပ် လာတယ်။ စိတ်ဖိစီးလွန်း လာတယ် ဆိုရင် ဝင်သက် ထွက်သက် တွေ အလွန်တိုလွန်း မြန်လွန်းနေ တတ်ပါတယ်။
ဝင်သက် ထွက်သက်မှာ သတိလေးနဲ့ ထားနိုင်မယ် ဆိုရင် ဝမ်းဗိုက်ရော ကိုယ့်ကိုယ် ကိုရောကို အလွန် တရာ သက်တောင့် သက်သာ အခြေအနေမှာ ထားနိုင် ပါလိမ့်မယ်။ ဝင်သက် (ရှုသွင်းခြင်း) ထက် ထွက်သက် (ရှုထုတ်ခြင်း) ကို ခပ်ရှည်ရှည် ထားခြင်းဟာ အကောင်းဆုံး အခြေအနေပါပဲ။ ဒါဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တင်းကြပ်မှု ကနေ သက်သာစေပြီး..စိတ်ဝင်းစားဖွယ် အကျိုးကို ပေးပါလိမ့်မယ်။
ကဲ အခုပြော ခဲ့တဲ့ အချက်တွေ အကုန်လုံးကို ယနေ့က စပြီး အကုန် လိုက်နာ ကြည့်ပါ။ အောင်မြင် ပါလိမ့်မယ်။ ဖန်တရာထေအောင် ကြားဖူးနေကျ အချက်တွေနဲ့ ကွာခြားကောင်း ကွာခြားနိုင်ပေမယ့် ယခုအချက်တွေဟာ အလွန်ရိုးရှင်းပြီး..အံ့သြဖွယ်အကျိုးကိုပေးမှာပါ။ ဇွဲနဲ့ မဖောက် မပြား လိုက်နာ ဖို့တော့လိုပါတယ်။ အားလုံး ဗိုက်အဆီပိုကို အောင်မြင်စွာ တိုက်ထုတ်နိုင်ပါစေ။
PS. အိပ်ထမတင် အခါ ၁၀၀၀ မလုပ်သင့်ပါ။ စကားအဖြစ်ပြောတာပါ။ အခါ ၁၀၀၀ လုပ်မယ့်အစား တကိုယ်လုံးလှုပ်ရှား တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း တစ်မျိုး ကိုလည်း လုပ်ပါလို့ ပြောခြင်းပါ။
Credit : ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ
Originally published at - http://www.lwinpyin.com/2016/12/healthy.html
ကဏ္ဍ ကျန်းမာရေးဆောင်းပါး, ဗဟုသုတများ